Mgbe afọ ole na ole gachara, Apple TV laghachiri Amazon | Akụkọ akụrụngwa
Afọ ole na ole gara aga, ihe fọrọ nke nta ka ọ daba na mwepụta nke ọgbọ Apple nke anọ, nke mbụ itinye ụlọ ahịa nke ya, onye ahịa ahịa Amazon were iwe na manzanita n'ihi na ngwaọrụ a na-asọ mpi na Fire TV. Ma obere ma ọ bụ umengwụ, ma na-akwado nkwado ya maka azụmaahịa efu, Amazon wepụrụ Apple TV na ebe nrụọrụ weebụ ya. Kemgbe ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịhụ otu n'ime aghụghọ ndị a, agbanyeghị, ihe na-agbanwe.
Ná ngwụsị afọ gara aga, Amazon na-agbasawanye ọrụ vidiyo vidiyo ya na mberede Amazon Prime Video ruo ọtụtụ narị mba gburugburu ụwa. Ọ chọpụtabeghị ịsụgharị ngwa kwekọrọ na ya n'ezie, ọ nweghị ọsọ ọ bụla iji mepụta ngwa maka Apple TV dị ka a ga - asị na ha mere Netflix, HBO na ọtụtụ ndị ọzọ. Ma ebe ọ bụ na ugbu a ngwa ahụ na-achọ ịbịa, Apple TV abụkwaghị ihe a machibidoro iwu, ma malite ịpụta na shelf a ma ama nke Amazon.
N'ihi na mmasị m hụrụ gị n'anya andres
Amazon bụ ụlọ ọrụ ma dị ka ndị dị otú a ọ na-ebugharị ya site na uru. Ọ bụghị ihe ọjọọ, anyị ekwesịghị ikpe ya ikpe maka ya, mana ntakịrị ngosipụta, oge ụfọdụ, enwere ekele.
Ọkụ TV VS Apple TV
Ka afọ ole na ole gachara nke Amazon jigidere veto na ntọala set-top nke ndị Cupertino bidoro, Apple TV amalitelarị ịpụta ọzọ na Amazon, ọkachasị, Apple TV 4K nke e gosipụtara ụwa na Septemba gara aga. 12 tinyere iPhone 8 ọhụrụ, iPhone X na Apple Watch Series 3. N’ụzọ doro anya, nke a nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme na asịrị na-eto eto na ngwa nke Video Amazon Prime n'ihi na Apple TV na-achọ ịmalite na ụlọ ahịa ngwa tvOS. N’ezie, ọbịbịa gị nwere ike ibido dị ka echi.
Dị ka ọ na-egosi, ọ na-apụ n'anya, ọ bụ ezie na egosiri ya na ngwaahịa, ugbu a Apple TV 4K apụtaghị ọzọ, agbanyeghị na ọ na-eme na ntụnye ọchụchọ. Ma ihe doro anya bụ na Amazon agaghị emepụta peeji nke ngwaahịa ma ọ bụrụ na ị bu n'obi iji ya.
N'aka nke ọzọ, mmalite nke Amazon Prime Video ngwa nwere ike ịdị nso dịka anyị gosipụtara, mana ọ nwekwara ike gbuo oge maka izu ole na ole. Thatbụ na ọ nwere ike, Ọ bụ ezigbo akara ngosi, nkwagharị ahụ na-egosi na Amazon chọrọ ịkwalite ọrụ vidiyo ya na-asọba kama ire akụrụngwa ya. Ọ bụ ezie na ọ bụkwa eziokwu na Ngwaọrụ Chromecast Google, nke anaghị akwado Amazon Prime Video, ka na-efu. Chee echiche banyere nke a dịka ịga n’ihu, kama ịkwụsị iji ogologo saga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Mgbe afọ ole na ole gachara, Apple TV laghachiri Amazon
Ngwa ndị ọzọ dijo
Ọ bụ oké ozi ọma na-ekiri Amazon praịm video on Apple tv
Zaghachi ngwa ndị ọzọ
Kpamkpam kwenyere. Ọzọkwa, nke ịdọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ireghị ya n'ihi na ị mepụtaghị ngwa maka ya, ọ dị ka ọ bụ ihe jọgburu onwe ya hahaha.
Echiche kacha mma!!